कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा स्थानीयको अवरोध- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
त्यसैले भन्ने गरिन्छ, ‘वी आर लिभरपुल’ अर्थात् ‘हामी लिभरपुल हौं’ । विश्वका सबै समर्थक भावनात्मक रुपमा एउटै परिवार जस्तै । यही कारण क्लबका व्यवस्थापक योर्गन क्लोपले पनि लिग जित्नेबित्तिकै भनेका थिए, ‘लिभरपुलले लिग जितेपछिको खुसी सबैभन्दा पहिले आफ्नै समर्थकसँग साट्न चाहन्छु ।’
असार २०, २०७७ हिमेश
काठमाडौँ — बिहान–बिहानै म्यासेन्जरमा बजेको सन्देश एक प्रकारले ठीकै थियो । त्यसमा हरिवंश आचार्यको ‘१५ गते’ टेलिफिल्मको एउटा वाक्य कपी गरेर त्यही फोटोअनुसारको भाव यसरी पोखिएको थियो, ‘यसरी हारेपछि लिग जितेको त मतलब नै भएन नि ?’
लिभरपुलका नेपाली समर्थक तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर
त्यस खेलअगाडि सबै लिभरपुल समर्थक एक प्रकारले मक्ख थिए, आफ्नो प्रिय क्लबलाई इंग्लिस प्रिमियर लिग जितेको सम्मानमा म्यानचेस्टर सिटीले ‘गार्ड अफ अनर’ दिने भनेपछि । पछिल्लो लिग विजेताको घरमा यस्तो आतिथ्यता कहाँ जहिल्यै पाइने हुन्छ र ?
तर इतिहादमा खेल सकिँदासम्म सबै लिभरपुल समर्थकको मन तीतो भइसकेको थियो । आखिरमा ४–० को हार कहाँ पचाउन सकिन्छ र ? धन्न, लिभरपुलले लिग जितिसकेको थियो, त्यसैले त्यो नतिजाको खासै मतलब भएन । विश्वास नहुन सक्छ, लिभरपुलले यसपल्ट लिग जितेको ३० वर्षपछिको पहिलो थियो । यसअघि सन् १९९० ताका लिग जित्दा त्यो इंग्लिस प्रिमियर लिग नै थिएन, पुरानो माथिल्लो डिभिजनको फुटबल थियो । त्यसयता एकपछि अर्काे वर्ष आयो, सिजनपछि अर्को सिजन पनि आयो । अहँ, लिग जित्नै सकेको होइन ।
प्रतिद्वन्द्वी क्लबका समर्थकलाई जिस्क्याउन पर्याप्त मसलाको कमी थिएन । भन्नेहरू भन्थे, लिभरपुल बलियो इतिहास बोकेको क्लब त हो तर यसको वर्तमान छैन । सुन्नै पर्‍यो, भाग्नुभएन । प्रत्येक सिजनको अन्त्यमा लिभरपुल समर्थक भन्ने गर्थे, ‘अब त अर्को सिजन ।’
लिभरपुल उपाधिको नजिक–नजिक नपुगेको पनि होइन, तर लिग उपाधि जति नजिक थियो, पछि उत्तिकै टाढा पनि साबित भयो । सामाजिक सञ्जालतिर धेरैले मन पराएको अर्को एउटा ग्राफिक्स क्लिप पनि छ । त्यसमा बुबाले सानो छोरालाई लिएर लिभरपुलको खेल हेर्न गइरहन्छ ।
एकपछि अर्को सिजन । त्यो सानो बच्चा हुर्कंदै जान्छ, बुबा बूढो हुँदै जान्छ । आखिरमा बुबाको मृत्यु नै हुन्छ, छोराको पनि छोरी हुन्छ । बल्लतल्ल यो सिजन आएर लिभरपुलले उपाधि जित्छ । खुसियाली छाउँछ । काल्पनिक नै सही, यो क्लिप खुबै मन छुने खाले छ । पछिल्लो तीन दशकमा लिभरपुल समर्थक हुनुको अर्थले यति धेरै पीडा बोक्नुपरेको छ, लिग नजित्दा । त्यसको अगाडि अहिले म्यानचेस्टर सिटीसँगको हार त के को पीडा र ? बानी पो परिसकेको थियो, कसैले उडाएको सुन्नु पनि ।
इंग्ल्यान्डतिरका लिभरपुल समर्थकलाई यसबीच कस्तो भएको हुँदो हो, अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसको सात समुद्रपारि एउटा क्लबको समर्थक हुनुको नाताले प्राप्त हुने खुसी, दु:ख, पीडा र आक्रोशचाहिँ कम्तीको हुन्न ।
नेपालमा पनि इंग्लिस प्रिमियर लिगलाई एकोहोरो माया जस्तो गरेर फुटबल हेर्नेको कमी छैन । त्यसमध्ये बाक्लै संख्यामा लिभरपुल समर्थक छन्, सायद त्यो भन्दा बढी म्यानचेस्टर युनाइटेडका समर्थक होलान् । चेल्सी र आर्सनलका समर्थकको पनि कमी छैन ।
र, यसले देखाउँछ । नेपालमा फुटबल हेर्ने संस्कति कस्तो हुँदैछ र कसरी विकास भइरहेको छ भनेर । फेरि दोहोर्‍याएर कुरा गर्नु परे पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल हेर्ने संस्कृतिबारे बुझ्न केही वर्ष पछाडि फर्कनु नै पर्छ । नेपाल टेलिभिजनबाट देखाइएको पहिलो विश्वकप सन् १९८६ को हो । त्यतिबेला अर्जेन्टिनाले विश्वकप जित्यो, धेरैभन्दा धेरै नेपाली अर्जेन्टिनाकै समर्थक भए । डिएगो म्याराडोना भनेपछि उनी जत्तिको राम्रो फुटबल खेल्न सक्ने अरू कोही छैनन् भनेर विवाद गर्ने पनि भए ।
सन् १९९० को वरिपरि नेपाल टेलिभिजनले फुटबलसम्बन्धी केही कार्यक्रम चलाउने गथ्र्यो । जस्तो ‘रोड टु वेम्बली’ र ‘फुटबल मेड इन जर्मनी’ । इटालीको फुटबल देखाउने अलग्गै कार्यक्रम थियो । त्यो त्यही समय थियो, जति बेला लिभरपुल बलियो थियो र लिग जितेको थियो । भनिरहनुपर्दैन, त्यो जमानाका दर्शकमध्ये धेरै लिभरपुल समर्थक भए । इटालीतर एसी मिलानको जगजगी थियो, त्यसका पनि केही समर्थक भए । विशेषत: मिलानका तीन डच खेलाडीलाई मन पराउने भए । त्यसमा रुड गुलिट, मार्को भान भास्टन र फ्रान्क रायकार्ड रहे ।
त्यस बेलाको नेदरल्यान्ड्सको टिम पनि कम्तीको थिएन । पछि गएर इंग्लिस प्रिमियर लिगका अधिकांश खेल मज्जाले हेर्न पाइने भयो, जतिबेला म्यानचेस्टर युनाइटेड र सर एलेक्स फर्गुसनको प्रभुत्व चलेको थियो । त्यसै पनि पूरा विश्वमा म्यानचेस्टरका समर्थक धेरै छन् । यसकै छनक देखिने गरेर नेपालमा पनि धेरै भए । त्यसकै छेउछाउमा आर्सनल र चेल्सीले लिग जिते, उसका समर्थक पनि बन्दै गए । यसबीच लिभरपुलले लिग त जितेन तर समर्थक भने गुमाएन ।
बरू थपिँदै गयो र यसको एउटा ठूलो कारण लिभरपुलले युरोपेली च्याम्यिन्स लिग जित्नु थियो । त्यो सम्भव भएको थियो सन् २००५ मा इस्तानबुलको चामत्कारिक रातमा । तर यसले घरेलु लिग नजित्नुको पीडामा मल्हम लगाउने काम गरेन । म्यानचेस्टर युनाइटेडले भटाभट लिग जित्दा हाम्रै ती क्लबका समर्थकको खुट्टा भुइँमा थिएन । तिनलाई पनि लिभरपुल समर्थक भनेपछि जिस्क्याउँदाको मज्जा नै अर्कै । पछि त यस्तै काम आर्सनल र चेल्सी समर्थकले पनि गरे ।
तीन दशकसम्म लिग नजित्दा मन सानो बनाउन बाध्य नेपाली समर्थक कस्ता–कस्ता छन् त ? तीन नाम कहलिएका समर्थकको कुरा गरौं न ।
पहिलो त भए, काठमाण्डू पोस्टका पूर्वसम्पादक अखिलेश उपाध्याय । उनी लिभरपुल भनेपछि हुरुक्कै हुने खालका थिए । लिभरपुलले जितेको दिन, उनको मन सानो फुच्चे समर्थक जत्तिकै हुन्थ्यो । न्युज रुममा भेट्दा पनि टाढैबाट मुस्कुराएर आउँथे र खेलको कुरा निकालिहाल्थे । आखिरमा सम्पादकको च्याम्बरमै लिभरपुलबारे कुरा गर्न पाउँदा त्यसको खुसी कसरी शब्दमा बयान गर्न सकिन्छ र ?
यी सम्पादक दाइ कसरी लिभरपुल समर्थक बने त ? यसका लागि टेलिभिजनको प्रसंगले मात्र पुग्दैन, रेडियाको जमानामा पुग्नुपर्छ । सन् ७० तिर पनि लिभरपुल नै इंग्ल्यान्डको नम्बर एक टिम थियो, त्यतिबेला पनि क्लबले एकपछि अर्को उपाधि जितेको थियो । उनी रेडियोमा कमेन्ट्री सुन्ने गर्थे । उनले राति भनेनन्, काम छ भनेनन्, रेडियोमा कमेन्ट्री सुनिरहे । र, बने लिभरपुलका जबरदस्त समर्थक । क्लबले भर्खर उपाधि जित्दा उनी कति खुसी थिए भनेर बुझ्ने हो भने उनका ट्वीटर पेजमा हेरे पुग्छ ।
उनी जत्तिकै लिभरपुल समर्थक त नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का पनि हुन् । अनौपचारिक कुराकानीमै सही । उनी भन्थे, ‘लिभरपुलको समर्थक कसरी भयो, ठ्याक्कै थाहा भएन ।’ यो त एक जोडी प्रेमीलाई तिमीहरूबीच कसरी माया बस्यो भनेर सोध्यो भनेर आउने उत्तर जस्तै हो, ‘थाहै भएन, माया भएपछि मात्र चाल पाइयो ।’ तर एउटा तथ्य के निश्चित छ भने इस्तानबुलमा लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिग जितेपछि उनी लिरभपुलका पक्का भक्त भए । उनी पनि लिभरपुलबारे आफ्ना भावना सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहन्छन् । अनौपचारिक नै सही उनले पनि अन्य सबै लिभरपुल समर्थकले जस्तै भन्ने गरेका छन्, ‘मलाई त कहिलेकाहीं लिभरपुलले जित्दा भन्दा पनि म्यानचेस्टर युनाइटेडले हार्दा खुसी लाग्छ ।’
म्यानचेस्टर सिटीविरुद्ध खेल्दै लिभरपुलका खेलाडी । तस्बिर : एपी
जसरी पूरा विश्वलाई थाहा छ, लिभरपुल र म्यानचेस्टर युनाइटेड सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन् । त्यसरी नै नेपालमा यी दुई क्लबका समर्थक पनि एकापसमा मिल्दैनन् । एकले अर्कोको खेदो खनेकै हुन्छन् । पारस पनि यसका अपवाद रहेनन् । एलेक्स फगुर्सनले पनि पहिलोपल्ट म्यानचेस्टर सम्हाल्दा भनेकै थिए, उनको एकमात्र लक्ष्य भनेको लिग उपाधि जित्नेक्रममा लिभरपुललाई उछिन्ने ।
जतिबेला उनले पहिलोपल्ट बोलेका थिए, त्यसलाई सबैले हाँसेर उडाए । तर उनले काम भने गरेर नै देखाए । अब सायद लिभरपुलको पालो हो कि लिग बढी जितेको होडमा म्यानचेस्टरलाई उछिन्ने ? अब तेस्रो लिभरपुल समर्थकको पालो । उनी हुन् नेपाली कांग्रेसका नेता उदयशमशेर राणा । उनी कसरी लिभरपुल समर्थक भए, त्यसबारे सोध्ने अवसर पाइएको छैन । तर अनुमान छ उनी पनि सन् ७० तिरै फुटबल हेर्थे ।
आफ्ना साथीभाइबीच लिभरपुल समर्थक थुप्रै छन् । नेपाली राष्ट्रिय टिममै पनि लिभरपुल समर्थकको कमी छैन, खुलेर नै यो क्लब समर्थक हुँ भन्नेमा जगजित श्रेष्ठदेखि विशाल राई पर्छन् । उनीहरूसँगै हात्तीसारको एउटा रेस्टुरेन्टमा लिभरपुलको खेल हेरेको छु । लिभरपुलको खेलमात्र त्यो रेस्टुरेन्टमा देखाइन्छ । त्यहाँ पुगेपछि पहिलोपल्ट अनुभव भयो, लिभरपुलका समर्थक त हाम्रो काठमाडौंमै पनि धेरै रहेछन् । नेपाली फुटबल टोलीका प्रमुख रक्षक अनन्त तामाङ मैदानबाहिर विशालसँगै लिभरपुलको ट्युन मिलाइरहेका हुन्छन् ।
उनीहरूसहित पूर्वबैंकर सुधीर खत्री, गायक स्वप्निल शर्मा, पाइटलद्वय डीबी बस्नेत, भगवान थापा जस्ता सेलिब्रेटी लिभरपुलका समर्थक छन् । उनीहरूजस्ता धेरैलाई अफिसियल लिभरपुल स्पोर्ट्स क्लब नेपाल (ओएलएससी) ले एक स्थानमा उभ्याएको छ । बिस्तारै नेपालमा गठित लिभरपुल समर्थकको समूहमा आबद्ध भएयता धेरै जानकारी पाइयो । लिभरपुल फुटबल क्लबकै आधिकारिक मान्यता रहेको यस ओएलएससी पीयूष न्यौपाने, निश्चल अधिकारी, सुशोभन मल्ल, सौरभ नेपाल जस्ता युवाको काँधमा अगाडि बढिरहेको छ ।
सबैभन्दा बढी खुसी त त्यतिबेला लागेको थियो, जतिबेला पोहोर लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिग जित्दा ठमेलको पर्पल हेजमा स्क्रिनिङ गरिएको खेल हेर्न पाइयो । लिभरपुलले टोटेनहमलाई हराएर च्याम्पियन्स लिग जितेको थियो । ठमेलमा एनफिल्ड जस्तै अनुभव भएको थियो । त्यस पबमा छिर्न पनि लिभरपुलको जर्सी अनिवार्य थियो । पहिलोपल्ट के भित्र पुगें । आश्चर्य नै लाग्यो, हजारौं लिभरपुल समर्थक थिए । ती कम्तीमा समर्थक थिएन, लिभरपुलसँग जोडिएका प्रत्येक गीत दुरुस्त गाउन सक्ने खालका थिए ।
कसैलाई लाग्न सक्छ, लिभरपुलले इंग्ल्यान्डमा लिग जितेको छ, हल्ला काठमाडौंमा बढी किन ? कसैले यस्तो प्रश्न सोध्छ भने बुझौं, त्यसलाई फुटबलबारे धेरैथोक थाहा छैन । अहिलेको विश्व फुटबल भन्नु नै यस्तै हो, यसको कुनै भौगोलिक सीमा छैन । तपाईं कुनै क्लबलाई मन पराउनुहुन्छ भने त्यसमा परिवर्तन हुने गर्दैन पूरा जीवन । मन परेको क्लबले जित्दा खुसी, हार्दा दु:ख । लिभरपुल समर्थक भएको नाताले हामीजस्ता धेरै खुसी छन्, चाहे त्यो काठमाडौंको होस् या अन्यत्रका ।
त्यसैले भन्ने गरिन्छ, ‘वी आर लिभरपुल’ अर्थात् ‘हामी लिभरपुल हौं’ । विश्वका सबै समर्थक भावनात्मक रूपमा एउटै परिवार जस्तै । त्यसैले त क्लबका व्यवस्थापक योर्गन क्लोपले पनि लिग जित्नेबित्तिकै भनेका थिए, ‘लिभरपुलले लिग जितेपछिको खुसी सबैभन्दा पहिले आफ्नै समर्थकसँग साट्न चाहन्छु ।’ उनकै शब्दमा भन्दा लिभरपुल समर्थकले धेरै दु:ख बेहोर्नुपरेको छ, लिग जित्न नसक्नुको कारण । अब लिग जितेपछि खुसीको पहिलो हकदार पनि समर्थक नै हुन् ।
‘तिमी एक्लै हिँड्ने छैनौं’
लिभरपुलको एन्थम गीत हो, ‘यू विल नेभर वाक एलोन’ । त्यसको सार ‘तिमी एक्लै हिँड्ने छैनौं’ भन्ने हो । लिभरपुलको घर एनफिल्डमा खेल सुरु हुनुअगाडि यो गीत समर्थकले गाउनै पर्छ । यो त परम्पराजस्तै भइसकेको छ । यो गीत सुनेपछि एकातर्फ लिभरपुलका खेलाडीको हौसला नै अकासिन्छ भने विपक्षी खेलाडीको मनोबल नै गिर्ने गर्छ । यो कोही लिभरपुल समर्थकले भनेको पनि होइन, यस्तो अनुभव पोख्ने धेरै विपक्षी टिमका खेलाडी छन् ।
खासमा यो लिभरपुलका लागि लेखिएको गीत थिएन । खासमा यो त गीति नाटकको एउटा गीत न थियो । त्यसको दोस्रो भागमा यो खुबै हृदयविदारक क्षणमा बज्थ्यो । त्यस गीति नाटकका मुख्य महिला पात्रले आफ्नो प्रेमिकालाई गुमाएपछि बज्ने गर्छ, ‘तिमी एक्लै हिँड्ने छैनौं’ भनेर । पछि यसलाई लिभरपुलको एउटा ब्यान्ड ग्यारी एन्ड द पेसमेकर्सले गायो र यही गीतलाई लिभरपुल समर्थकले पनि एनफिल्डमा लय मिलाएर गाउन थाले ।
खासमा भएको के थियो भने लिभरपुल एनफिल्डमा आफ्नै डिजे भएको इंग्ल्यान्डकै पहिलो क्लब थियो । खेल सुरु हुन अगाडि उनी त्यसताका चार्टको शीर्षस्थानमा रहने गीत बजाउने गर्थे । सन् ७० तिर इंग्ल्यान्डमात्र के हो र पूरा विश्वमै द बिटल्सले तहल्का मच्चाइरहेको थियो । फेरि त्यसमाथि यो ब्यान्ड लिभरपुलकै थियो । एनफिल्डको दर्शकदीर्घामा बसेर क्लब समर्थकले धेरैपल्ट द बिटल्सका गीत गाए । यसैक्रममा धेरैको ‘यू विल नेभर वाक एलोन’ मनमा बस्यो । अब त यो लिभरपुलकै गीतभन्दा पनि हुन्छ वा हुन्न पनि ? कारण ? कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले सबैभन्दा बढी पिरोलिएको देश त इंग्ल्यान्ड पनि हो । त्यहाँ बिरामीको उपचार गर्न चिकित्सकीय टोलीले खुबै मिहिनेत गरेको थियो, डाक्टरदेखि नर्ससम्म । तिनकै उत्साह बढाउन पनि यो गीत एकपछि अर्को अवसरमा बजाइयो । यही गीत सुनेर बिरामीमा पनि खुसी छाएको थियो । अब भनेपछि यो गीतलाई लिएर लिभरपुल समर्थकमा थप गर्व महसुस हुनेछ ।
क्लोप, डगलिस र जेरार्ड
अन्त्यमा सबै लिभरपुल समर्थकले भन्ने गरे जस्तै कुरा कोट्याऔं न । यसपल्ट लिग जित्नुको सबैभन्दा बढी श्रेय कसलाई दिनुपर्छ त ? यसमा धेरैको उत्तर आउने गर्छ, व्यवस्थापक योर्गन क्लोपको । आखिरमा उनको हेभिमेटल शैलीको फुटबलले काम गरेको नै हो । त्यसो त क्लोपकै भाषामा लिभरपुलले लिग जित्नुको सबैभन्दा ठूलो श्रेय खेलाडीलाई नै जानुपर्छ । खेलाडीले खेलेर नै त लिग जितेको हो । तर यो टिम बनाउने काम भने क्लोपको नै हो ।
उनी आउनु अगाडिसम्म लिभरपुल बलियो टिम त थियो । तर त्यसमा त्यो विश्वास थिएन, जसले उसलाई जिताउन मद्दत गरोस् । क्लोपले यही काम गरेका थिए । अहिलेका लिभरपुल खेलाडी राम्रा त छन् नै । तिनमा लिग जित्न सक्ने आत्मविश्वास भर्ने काम क्लोपले गरे । खासमा यी जर्मन क्लोप आधुनिक फुटबलका जबरजस्त प्रशिक्षक हुन् । खेलाडी त उनी राम्रा थिएनन् तर प्रशिक्षक अब्बल दर्जाका भए । यो त खराब कवि राम्रा समालोचक भएजस्तै हो ।
लिभरपुल प्रशिक्षक योर्गन क्लोप तस्बिर : एपी
जतिबेला उनी पहिलोपल्ट लिभरपुल क्लबको प्रशिक्षक नियुक्त भए । उनले भनेका थिए, ‘४–५ वर्ष लाग्न सक्छ, यो क्लबले लिग जित्नेछ ।’ उनी आएपछि त लिभरपुललाई उपाधि जित्ने बानी नै परेको छ । चाहे त्यो च्याम्पियन्स लिग होस् वा क्लब वल्र्डकप । अझ भन्ने हो भने उनी आएपछि लिभरपुलमा सफलताका पुराना दिन फर्केका छन् । पूर्वकप्तान स्टेफन जेरार्डले भने जस्तै, क्लोपका सालिक त बनाउनुपर्छ नै एनफिल्डबाहिर ।
ठीक यहाँनिर दुईको नाम धेरैले छुटाउन चाहेनन्, केनी डगलिस र जेरार्डको । दुवै लिभरपुलका लिजेन्ड हुन् । खेलाडी छँदा त डगलिसले लिभरपुलका लागि खेलाडी भएर सबथोक नै जिते । प्रशिक्षक भएर भने लिग जिते । ब्ल्याकबर्नलाई व्यवस्थापक भएर प्रिमियर लिग नै जिताए । त्यो अर्कै कुरा भयो । क्लोप र ब्रेन्डन रोजर्स अगाडि पनि एक समय उनले दोस्रो कार्यकालका रूपमा क्लब सम्हालेका थिए । उनी लिभरपुलको स्वर्णिम दिनका पात्र हुन्, अहिलेको लिग जित्नुमा उनको कुनै न कुनै भूमिका छ ।
अनि जेरार्ड ? डगलिस लिभरपुल क्लब इतिहासका सर्वकालीन नम्बर एक खेलाडी हुन् भने जेरार्ड नम्बर दुई । लिभरपुल समर्थकमाझ उनी उत्तिकै लोकप्रिय छन्, सबैका प्रियपात्र हुन् । उनले पनि खेलाडीका रूपमा लिग जित्न नै सकेनन् । तर लिभरपुल समर्थकलाई एकसूत्रमा बाँधेर राख्ने काम यिनैले गरेका हुन् । त्यसैले त लिभरपुलले यसपल्ट लिग जितेपछि सबैले दोहोर्‍याएर तेहेर्‍याएर उनलाई सम्झिए । यसपल्टको लिग सफलताको सुरुआती जग कहींकतै उनैले त तयार पारेका हुन् ।
प्रकाशित : असार २०, २०७७ १२:३९